Ukubhaliswa Kwemikhiqizo Yengulube - eNingizimu Afrika
Ukubhaliswa Kwemikhiqizo Yengulube
Abalimi bangavumela izingulube zabo ukuba zigijime ngokukhululekile ngaphandle futhi zingasebenzisi izondlo noma ama-antibiotic, kodwa umkhiqizo wabo uzothola kuphela ukubhekwa kwamahhala, okukhulunywa ngawo noma okukhulunywe ngamadlelo, uma ilebula kanye nemigomo yokukhiqiza ibhalisiwe noMnyango Wezolimo, AmaHlathi amaHlathi futhi ahlolwe njalo ngumcwaningi wokuzimela ozimele, njengoMkhandlu Wemboni YaseNingizimu Afrika.
Izitshalo zazivaliwe ngezigcawu zaso sonke isikhathi sokubeletha kwamasonto angu-16, ngoba kwakukholelwa ukuthi kuzosiza ukuvimbela ukuhlukumeza. I-"yokuhlwanyela inhlamvu" yokudla isetshenziselwa ingulube ekhiqizwa ohlelweni lapho ohlwanyela echitha khona isikhathi esincane kulezi zigcawu - ukuze afanele ukuhlwanyela i-label enobuciko e-Woolworth, angagcinwa kuphela emagodini phakathi nesonto lokuqala lokukhulelwa, kuyilapho zingagcinwa khona kuze kube amasonto ayisishiyagalombili ukuze zifanelekele ilebuli ye-PicknPay.
Ngemva kwalokho, izihlwanyelo ezikhulelwe ziqoqwe ndawonye futhi zinenkululeko yokuzungeze futhi zihlanganyele ngaphambi kokuba zihanjiswe kumakhanithi angama-farrowing ngesonto ngaphambi kokubeletha. Ngenkathi kunezinhlangano eziphikisana nokusetshenziswa kwamakhanithi ase-farrowing, iningi labalimi nezinkampani ezisetshenziswa ngalelibula livumela abahlwanyela kanye nezingulube zabo ukuba bahlale lapho kuze kube amasonto ayisithupha, kuze kube yilapho izingulube zisuliwe.
Ukuphikisana kwama-crrowing amakhupha ukuthi kuthuthukisa inhlalakahle yezilwane ngokunciphisa kakhulu ukufa kwezingulube, ngokunciphisa ukuphathwa, ukuvimbela ukuhlwanyela ukuchoboza izingulube nokuqinisekisa ukuthi izingulube zifudumele futhi zikwazi ukufinyelela kahle emthonjeni wabo wobisi.
Amakhodi ngokuvamile anezinye izitshalo abakhiqizi abadinga ukuhambisana nabo ukuze bafanelekele amalebula abo. Ngokuvamile lezi zihlobene nenhlalakahle yezilwane, ukulandelana kwemikhiqizo, impilo yezilwane kanye nokwelashwa kwezilwane, izindleko zokudla kanye nezindlu kanye nokuthungulwa nokubulawa kwabantu.
Ukukhiqizwa Kwezingulube Ezingavalelwe
Ibanga lamahhala libonisa ukuthi izingulube azigcini ezitokisini, kepha ikakhulukazi zidla ngaphandle futhi zikwazi ukungena mahhala kuma-paddocks amancane. Kukhona ukuhlukahluka kwalokhu kuhumusha, kanti abanye abalimi basebenzisa izigxobo ezide kakhulu kuze kube amasonto ayisithupha ukunciphisa ukufa kwezingulube. Ama-pig angeke akwazi ukusinda ngezinyosi noma kudlelo kuphela, ngakho kufanele futhi athole ukudla okungeziwe.
Amadlelo aphakanyisiwe ngokuvamile asetshenziselwa izingulube ezaphakanyiswa ngaphandle ngaphandle kwedlelo, kanti iningi lazo ezidlayo zivela emayini kodwa zenziwe nge-legumes, okusanhlamvu nokudla okulungiselelwe.
Abantu abangathí sina ngaleli bhokisi cishe bayodinga ukuthi lisetshenziselwe izingulube ezingenazigaba ezikhiqizwa ekuhlwanyeleni futhi ukuthi lezi zingulube zitholakale kuphela ngokudla okunempilo nokukhiqizwa kwemithi. Ama-antibiotic ngokuvamile avunyelwe, ngaphandle uma ngaphansi kwezimo ezimbi kakhulu. (Awekho ama-hormone asetshenziswa kunoma yiluphi uhlobo lokukhiqizwa kwezingulube eNingizimu Afrika, kungakhathaliseki ukuthi i-organic noma ayi.)
Ingulube 360 ​​iyisimiso sokuqinisekisa isitifiketi seNhlangano yaseNingizimu Afrika yabakhiqizi bezinkukhu.
Ibhalisiwe noMnyango wezoLimo, amaHlathi kanye namaHlishi ngo-2015 futhi iqinisekisa kubo bonke abathengi nabathengisi ukuthi umkhiqizi unenqubo eqhubekayo yokukhiqiza evumelana nezindinganiso ezithile.
Lokhu kuhlobene nezindinganiso zokuphepha zokudla, izidingo zokuhlanzeka kwehlanzekile kanye nokuhlanzeka, ukuphathwa kwezindlu, inhlalakahle yezilwane, ukugcinwa kwerekhodi, ukulandelela, ukukhiqiza ukulimala, ukulawulwa kwezinambuzane, ukondla kanye nekhwalithi yokudla, ukuphathwa kwezilwane, umquba kanye nokuphathwa kwamanzi, ukuthutha kanye nokusetshenziswa imithi kanye nemigomo.
Abakhiqizi bahlanganyela ohlelweni ngokuzikhethela. Kumelwe babe nomxhumanisi wezilwane ogunyaziwe ovame ukuvakashelwa, ukululeka nokuhlola izinqubo zepulazi nezokukhiqiza kanye nomqulu we-Standard Operating Producers, ohambisana nezilinganiso zePork 360.
Amapulazi ahlolwa njalo ngonyaka ngumcwaningi wemabhuku ozimele ukuqinisekisa ukuthi izindinganiso ezincane ezibekiwe zilandelwa.